हिमाल खबरपत्रिका | समाज: धर्मको अपव्याख्या
समाज: धर्मको अपव्याख्या
म राजधानी काबुलबाट करीब ८०० किलोमिटर पश्चिमको शहर हेरातमा थिएँ । साहित्यमा रुचि भएकी स्थानीय प्राथमिक विद्यालयकी शिक्षिका ताहिरा (४०), मसँग कुरा गरिरहन्थिन् । उनी भन्थिन्, “मलाई धेरै पढ्ने रहर थियो तर, रूसी सेना र अफगान मुजाहिद्दिनको युद्धको चेपुवामा पर्‍यो मेरो पढाइ ।” अफगानिस्तानमै अलिक खुला मानिने हेरातमा सन् १९९२ मा तालिवानको कब्जापछि कट्टरपन्थी शासन लागू भयो । उनीहरूले बालिकालाई विद्यालय जान, महिलालाई काम गर्न, एक्लै हिंड्न समेत रोक लगाए ।
तालिवानी अतिवादको अर्को उदाहरण एक चिकित्सक मित्रले पनि सुनाए । उनको क्लिनिकमा एक जना महिला आफ्नो बिरामी बच्चा लिएर आएकी रहिछन् । महिला पालो कुरेर बाहिर बसिरहेका बेला तालिवानी पुलिस आए, चिकित्सक र महिला दुवैलाई केरकार गरेपछि पुरुष चिकित्सकको नजिक महिला आउन नमिल्ने निर्णय सुनाए । ती महिला बिरामी बच्चा बोकेर रुँदै फर्किइन्, एउटा चिकित्सकले बिरामी बच्चाको उपचार गर्न नपाउँदा ग्लानि अनुभव भयो र उनले देश नै त्यागे । ती चिकित्सक अचेल पाकिस्तानमा छन् ।
तर अफशोच ! जबजब हिन्दू धर्मका अनेक कुसंस्कार मेरो अगाडि आउँछन्, मलाई लाग्छ के साँच्चिकै म हिन्दू धर्म मान्छु भनेर गर्व गर्नुपर्छ त ? कतिपय पण्डितहरू कुराकानीका क्रममा भन्छन्, “हिन्दू धर्ममा भएका कुसंस्कार त पछि थपिएका हुन्, वास्तवमा हिन्दू धर्म यस्तो होइन ।” त्यसो भए पण्डित र धर्मगुरुहरू ठूलो स्वरमा पुराण लगाउँदा धर्म र परम्पराका नाममा भइरहेका विकृतिबारे किन बोल्दैनन् ? जातीय विभेद हाम्रा धर्म गुरुहरूका लागि प्रमुख मुद्दा किन बनेको छैन ? मन्दिरमा सबै पस्न र पूजा गर्न पाउनुपर्छ भनेर पण्डितजीहरू किन ठूलो आवाज गर्दैनन् । रजस्वला भएकी महिलामाथि हुने विभेद अन्त्यका लागि खोइ ठूलो स्वर पारेको ?
धर्मलाई आफू अनुकूल व्याख्या गरी केही समयका लागि शक्ति आर्जन वा स्वार्थसिद्ध गर्न त सकिएला तर, त्यसले समाज समृद्ध हुँदैन । कुनै पनि धर्मका नाममा लिंग, जाति, पेशा वा अरू नै आधारमा मानिसहरूबीच विभेद गरिन्छ भने त्यसको विरोध हुनुपर्छ । यस्तो विरोध र त्यस अनुकूलको संशोधनले सम्बन्धित धर्मलाई नै समृद्ध बनाउँछ ।